ပိုမို မြန်ဆန် လွယ်ကူစွာ ချေးငွေလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မည့် နည်းပညာ Platform
ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဘဏ်များ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ငွေချေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ်၍	ချေးငွေများ
WALOAN app ၏ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာများ
ကျွန်တော်တို့ဟာ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ဖို့အတွက် ချေးငွေရရှိရန် ရှုပ်ထွေးတဲ့ စာရွက်စာတမ်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပရိုဂရမ်မာတွေဖြစ်ပါတယ်။
သင့်လျော်သော အတိုးနှုန်းနှင့် ပေးချေမှုအစီအစဉ်သည် သင်ဧ။်လူနေမှုဘဝ	ကိုမြှင့်တင်ရာတွင် သင်တန်ဖိုးထားသော အရာများကို	ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တည်ငြိမ်သော နေထိုင်မှုပုံစံကိုရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ထားပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့သည် ဘဏ်များ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အသေးစား ငွေကြေးကုမ္ပဏီများဖြင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကာ အချိန်ကုန်သက်သာ၍ တိကျမှန်ကန် မြန်ဆန်စွာဖြင့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ သတင်း	အချက်အလက်များ ရရှိနိုင်သော နည်းပညာ အခြေပြု ချေးငွေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအား လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
၃ မိနစ်ပဲ အချိန်ရတာ
သင့်လူနေမှုဘဝနှင့် ကိုက်ညီသော ချေးငွေကို ၃ မိနစ်အတွင်း WALOAN မှာ အမြန်ဆုံး ရယူလိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ မိသားစုတွေကို စမ်းသပ်အသုံးပြုစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အဖိုးသည် အက်ပလီကေးရှင်းကို လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး	အဖွားသည် နားလည်
သဘောပေါက်	အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါသည်။ သေသပ်လှပပြီး အသုံးပြုရ	လွယ်ကူတဲ့ ချေးငွေတွက်စက်ပါဝင်တာကြောင့် အခြားဂဏန်းပေါင်းစက် မလိုအပ်ပါ။
အသေးစားချေးငွေအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိပ်စာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်များ ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ သို့သော် ခေါ်ဆိုစရာမလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်ချေးငွေ
ရရှိရန် လိုအပ်သည့် အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းစွာသိရှိနိုင်ရန်အတွက်	မကြာခဏ ပံ့ပိုးပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ချေးငွေရယူရန် အဆင့် ၃ ဆင့်ပဲ လိုအပ်ပါတယ်
အဆင့် ၁- လျှောက်ထားလိုသည့် ချေးငွေအစီ
သင်နှင့်ကိုက်ညီသော ချေးငွေအစီအစဉ်ကိုရှာဖွေပြီး သမားရိုးကျနည်းများဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက အချိန်ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ သင့်အ
ခက်အခဲများကိုကူညီပေးရန် WALOAN မှ မိတ်ဖက် ဘဏ်များ၊
ငွေကြေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အသေးစား ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများက လက်တစ်ကမ်းတွင် စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။
အဆင့် ၂- လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို
ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားပြီး ပြောင်းလဲမှုများကိုလည်း အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြ
ပေးပါသည်။ လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို အချိန် ၃ မိနစ်သာပေး
ပြီး ဖြည့်စွက်လိုက်ပါ။ ကျန်ရှိသော လိုအပ်သည့်အရာများကို WALOAN မှာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်။
အဆင့် ၃ - ချေးငွေအတွက် ခွင့်ပြုချက်ရယူပါ။
နောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့် ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်ပြုချက်ရယူကာသင့်ရဲ့ အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေကို ဆွတ်ခူးလိုက်ပါ။ ချေးငွေပေးသွင်းရမည့့်် နောက်ဆုံးရက်ကို application မှတစ်ဆင့် အကြောင်းကြားပေးသွားပါမည်။
တစ်နေရာတည်းတွင် ပြီးပြည့်စုံစွာရရှိနိုင်မည့် ချေးငွေဝန်ဆောင်မှု Application
သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးလိုအပ်နေပါသလား? ဒါမှမဟုတ် သင်ချစ်ရသူတွေအတွက် လက်ဆောင်ဝယ်ပေးရန် စဉ်းစားနေပါသလား? ချေးငွေလျှောက်ထားရန် သင်ထင်သလို မခက်ခဲပါဘူး။ အခုပဲ WALOAN ကနေ သင်ရဲ့လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီ
သော ချေးငွေအစီအစဉ်ကို ရှာဖွေလျှောက်ထားလိုက်ပါ။
အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများသို့မဟုတ် အခြား ငွေကြေး
လုပ်ငန်းများမှ ငွေချေးရန်လျှောက်ထားသူ၏ ချေးငွေရယူထားသော မှတ်တမ်းများအား WALOAN App မှတစ်ဆင့်
WALOAN အသုံးပြုသူများ၏ အချက်အလက်များသည်
တိကျမှန်ကန်ဆုံး အထောက်အထားများအဖြစ် သိမ်းဆည်း
ပေးထားခြင်းဖြစ်သည့် အတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၏
အထောက်အထား စစ်မှန်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်း
နိုင်ရုံသာမက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်း အဆင့်အတန်း တိုးတက်မြင့်မားစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
စနစ်တကျ ငွေသုံးစွဲခြင်းသည် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများထဲမှ ခက်ခဲသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဧ။် ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော app လေးမှ ချေးငွေရယူမှု၊
ပြန်လည်ပေးသွင်းမှု တို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စနစ်တကျ
WALOAN App တွင် သင်ဖြည့်သွင်းထားသော စာရွက်စာတမ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့မှ လြုံခုံစိတ်ချစွာ သိမ်းဆည်းပေးထားသည့်
အတွက် နောက်တစ်ကြိမ်လျှောက်ထားမှုတွင် လိုအပ်သည့်
စာရွက်စာတမ်းများ ထပ်မံတင်ပြရန် မလိုအပ်ပါ။
စောင့်ဆိုင်းမှုကို ကျော်ဖြတ်လိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို
အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုမြန်ဆန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေ
သင့်ရဲ့အချက်အလက်များအားလုံးကို 2048bit လုပ်ငန်းပုံစံဖြင့် လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ အချက်အလက်များနှင့် ဆော့ဝဲများအားလုံးကို အပြည့်အဝထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
စေတနာအပြည့်နဲ့ ပထမဦးဆုံး Fin-tech နည်းပညာသုံး application .
၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း Fintech ကုမ္ပဏီများထဲမှ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ အသုံးပြုမှုနှင့်
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရှိဆုံး ကုမ္ပဏီအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည့် Global Fintech ကနေ WALOAN app ကို အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လိုအပ်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများ ထပ်မံဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုရ လွယ်ကူစေရန် ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းကို အစဉ်တစိုက် ဦးတည် ဆောင်၇ွက်လျက်ရှိပါသည်။ သင့် အခက်အခဲတွေကို ကူညီဖြေ
ရှင်းပေးမည့် မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ဦး တွေ့ရှိနေပါပြီ။
WALOAN သည် Global Fintech ရဲ့ ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေတို့၏ ဝေဖန် အကြံပြု ချက်များကို အလေးထား လက်ခံလိုပါသည်။
GLOBAL FINTECH COMPANY LIMITED.
အခန်း(၃၀၃)၊ AKK Shopping Mall (တတိယထပ်)
သင်္ဃန်းကျွန်းဈေး၊ သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်၊
အီးမေလ် - info@globalfintech.com.mm
တယ်လီဖုန်း - +(95)-9 977460891/ 892/ 893
စီးပွားရေး မိတ်ဖက်များ အတွက်
ကျွန်တော်တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ပိုမိုသာယာဝပြောသော အနာဂတ်ကို အတူတကွ တည်ထောင်
© 2019 Global Fintech Co., Ltd. မှ မူပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝ ရှိသည်။